မိမိဘာသာလျှို့ဝှက်ထားသင့်တဲ့ စိတ်ပညာဆိုင်ရာ အံ့သြဖွယ်အချက်များ
Posted by Fros on May 22, 2015
လေ့လာမှုတွေကတော့ ဒီလိုဆိုပါတယ်။ မှန်မမှန် ကိုယ့်ဘာသာဆုံးဖြတ်ကြပါနော်။
၁. မိမိရည်မှန်းချက်တွေကို တခြားသူတွေကို ပြောပြလိုက်ရင် ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်အောင် လုပ်ချင်စိတ် လျော့သွားတတ်ပါသတဲ့။ စေ့ဆော်အားလျော့သွားတာကြောင့်လို့ လေ့လာမှုတွေဆိုပါတယ်။
၂. လူအများစုရဲ့အကြိုက်ဆုံးသီချင်းဟာ သူတို့ဘ၀ထဲက ခံစားချက်နဲ့ ဆက်စပ်နေလေ့ရှိပါသတဲ့။
၃. ဂီတဟာ ကမ္ဘာကြီးအပေါ် မြင်တဲ့အမြင်ကိုတောင် ပြောင်းပစ်နိုင်ပါသတဲ့။
၄. တခြားသူတွေကို ပေးကမ်းဖို့ ငွေကုန်ကြေးကျခံတာဟာ ကိုယ်တိုင်အတွက်သုံးတာထက် စိတ်ကျေနပ်မှုပိုရစေပါတယ်တဲ့။
၅. လေ့လာမှုတွေအရ အတွေ့အကြုံတစ်ခုအတွက် ပိုက်ဆံသုံးတာက ပစ္စည်းဝယ်ဖို့ ပိုက်ဆံသုံးတာထက် ပိုပျော်ရွင်စေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၆. ကလေးတွေက အရင်ခေတ်ကထက် စိတ်ပိုပူတတ်လာပါပြီ။ အထက်တန်းကျောင်းသားတွေရဲ့ ပူပင်မှုပမာဏဟာ ၁၉၅၀ နှစ်တွေတုန်းက ပျမ်းမျှ စိတ်ဝေဒနာသည်တစ်ယောက်ရဲ့ ပူပန်မှုလောက် ရှိနေပါပြီ။
၇. ဘုရားရှိခိုးတာ၊ စုပေါင်းဝတ်ပြုတာတို့လို ဘာသာရေးအလေ့အထတွေဟာ စိတ်အားမငယ်ခြင်းနဲ့ ဆက်နွယ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။
၈. ပျော်ရွှင်မှုကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထ်ိ ငွေနဲ့ဝယ်လို့ရပေမယ့် တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၇၅၀၀၀ အထိ ၀င်အပြီးမှာ ၀င်ငွေတိုးလာတာဟာ ပိုမိုပျော်ရွှင်လာဖို့ မတတ်နိုင်တော့ကြောင်း လေ့လာမှုတွေအရ သိရပါတယ်။
၉. ပျော်ရွှင်တဲ့သူတွေနဲ့ အနေများရင် ကိုယ်လည်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်လာပါတယ်တဲ့။
၁၀. အသက် ၁၈ ကနေ ၃၃ နှစ်ကြားလူတွေဟာ ကမ္ဘာမှာ စိတ်အဖိစီးဆုံးသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၁. ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်နိုင်တယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လှည့်စားရင် အရင်ကထက် ပိုအိပ်ပျော်နိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်တဲ့။
၁၂. ဥာဏ်ထက်မြက်တဲ့လူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်သေးလေ့ရှိပြီး ငတုံးတွေကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တော်လှပြီ၊ တတ်လှပြီလို့ ထင်တတ်ကြပါသတဲ့။
၁၃. အတိတ်ကဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို သတိရတယ်ဆိုတာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးကို သတိရတာမဟုတ်ဘဲ အဲသည်ဖြစ်ရပ်အကြောင်း နောက်ဆုံး စဉ်းစားခဲ့တာကို သတိရတာပါတဲ့။
၁၄. ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုခုနဲ့တွေးရင် ပိုပြီး ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။
ကဲ..သုတေသနတွေက ဒီလိုဆိုပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေက ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းလောက် သဘောတူလက်ခံနိုင်သလဲ။ Comment ပေးခဲ့ကြပါဦး။
Credit to စုပြည့်စုံ